» Kooxaha Real Madrid Iyo Man United Oo ISku Garab Dhacay
Kooxaha Real Madrid Iyo Man United Oo ISku Garab Dhacay
Feb 14, 2013 - jawaab	Aqrisatay:3261Goolal ay madaxa ku kala dhaliyeen Danny Welbeck iyo Cristiano Ronaldo ayaa sababtay inay isku garab dhacaan kooxaha Real Madrid iyo Manchester United oo ku kala baxay barbaro 1-1 ah lugta hore ee wareega 16ka Champions League.
Fursadii ugu weyneyd ee ciyaarta ay ku bilaabatay waxaa heshay kooxda Real Madrid daqiiqadii 6aad ee ciyaarta, kubad uu si daciif ah uu u bixiyay Ferdinand ayaa waxaa helay Fabio Coentrao kaasoo darbo joog hoose la beegsaday goolka, waxaa faraha cidadooda ku taabtay De Gea ka hor inta aysan ku dhicin birta.
Real Madrid ayaana ciyaarta heysatay iyagoo sameyneysay qeybihii hore kubado weerar ah, balse kama aysan faa’ideysan, laakiin Manchester United ayay aheyd kooxdii hogaanka ciyaarta qabatay daqiiqadii 20aad.
Kooner ay heshay Manchester United oo uu soo tuuray Wayne Rooney ayaa waxaa madaxa la helay Danny Welbeck oo shabaqa dhex dhigay. Goolkaan ayaa Welbeck uu u ahaa goolkiisii ugu horeysay ee uu ka dhaliyo Champions League kooxdiisa oo marti ah.
Los Blancos ayaana durbadiiba ka shaqeysay inay ciyaarta ku soo laabato, waxaana ay goolka barbaraha heleen markii ciyaarta ay socotay nusa saac, karoos qatar ah oo uu soo dhigay Di Maria ayaa waxaa si fantastic ah u kacay oo madaxa la helay Cristiano Ronaldo oo shabaqa ka soo taabtay kooxdiisii hore, ciyaartana ka dhigay 1-1.
Afar daqiiqo ka dib United ayaa fursad fiican heshay iyadoo Welbeck uu u soo dhawaaday inuu mar kale shabaqa ka soo taabto Real Madrid ka dib markii uu kubad ka helay Van Persie, laakiin darbadiisa waxaa taabtay oo banaanka u saaray goolhaye Lopez.
Daqiiqadii 38aad ayaana Mesut Ozil uu helay kubad qatar ah oo loo soo qaaday, laakiin darbadiisii goolka waxaa ka beeniyay goolhayaha reer Spain David de Gea.
Daqiiqad ka dib Real Madrid ayaa fursad kale heshay, laakiin dadaalkii Ozil iyo Ronaldo waxaa iska caabiyay daafacyada Man United.
Daqiiqadii 40aad ayayna Real Madrid ku andacootay inay rigoore leeyihiin ka dib markii Di Maria oo ku dhex dhacay diilinta gaxaana isagoo ay hardamayeen Phil Jones, laakiin garsooraha Jarmalka ayaa u tilmaamay inaysan rigoore aheyn.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaana lagu kala nastay barbaro 1-1 ah, iyadoo kubada ay heysatay inta badan Real Madrid islamarkaana ay abuurtay fursadahii ugu badnaa.
Bilowgii qeybta labaad Ronaldo ayaa fursad ay soo martay ka dib markii uu baas ka helay Khedira, laakiin kubadiisii jooga hoose waxaa isku duubay De Gea.
Daqiiqadii 53aad ayaa mar kale la tijaabiyay De Gea iyadoo Di Maria uu goolka darbo xoog leh kaga soo toogtay meel 20 yard u jirta laakiin hadana goolhayaha reer Spain ayaa gacanta ku dhigay
Daqiiqadii 55aad Varane ayaa nasiib ku lahaa inuusan casaan qaadan ka dib markii uu ciriiriyay Evra oo goolka u furan islamarkaana ahaa ninka ugu danbeeyay, laakiin garsooraha ayaa tilmaamay inaysan qalad aheyn.
De Gea oo shaqo wacan u qabtay Man United ayaa daqiiqadii 60aad waxa uu si fantastik ah u badbaadiyay fursad uu ku helay Contrao oo goolka hortaagan ka dib karoos uu soo dhigay Sami Khedira. De Gea ayayna u aheyd markii lixaad oo uu fursad qatar ah ka beeniyo Real Madrid.
Daqiiqadihii 71aad iyo 72aad ayaa United ay soo martay fursado dahabi ah, fursada hore Rooney ayaa kubad u dhex bixiyay Van Persie oo xerada ganaaxa ka soo galay dhanka midig, laakiin darbadiisa waxaa ka taabtay Lopez iyadoo birta ay ku dhacday. Islamarkiiba United ayaa kubada dib u heshay waxaana kubad madax loogu soo qaaday Van Persie, iyadoo Alonso uu ku qaldamay inuu RVP offside ahaa. Van Persie oo goolka hortaagnaa ayaa kubada xabadka ku dejistay laakiin lugta ayuu la waayay inkastoo ay dib martay goolhaye Lopez kubada oo goolka ku sii socota waxaa bixiyay Alonso.
De Gea ayaa mar kale soo bandhigay geesinimadiisa daqiiqadii 79aad markii kubad isku soo laablaabatay uu afka hore ee xerada ganaaxa ka helay Khedira kaasoo darbo goolka la beegsaday laakiin waxaa isku duubay De Gea oo caawa si wacan u ciyaaray.
Ronaldo ayaana dhamaadkii ciyaarta mar kale u soo dhawaaday inuu gool dhaliyo, halka Van Persie fursad qatar ah uu ka badbaadiyay goolhaye Diego Lopez.
Ciyaarta ayaana ku soo dhamaatay barbaro 1-1 ah, iyadoo labadaan kooxood ku kala bixi doona kulanka lugta labaad ee ka dhici doonta Old Trafford bisha soo socota.